पर्वतमा पहिरोले घर पुरिँदा १ बालिकाको मृत्यु – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, २९ भाद्र सोमबार १३:४६
पर्वतमा पहिरोले घर पुरिँदा १ बालिकाको मृत्यु
पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नं. ४ मुडिकुवास्थित शिर्शुवामा पहिरोले घर पुरिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय नवीन विकको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँकी तीन वर्षीया छोरी निकिता विकको ज्यान गएको हो । मृतक बालिकाको शव साेमबार बिहान निकालिएको फलेवास नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष टिकाराम गौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पहिरोमा पुरिएर नवीन विककी श्रीमती लक्ष्मी विकसहित अन्य दुई जना घाईते भएका छन् । घर पुरिँदा घाइते भएकाहरुको गाउँले र स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए । पहिरोले बगाएर बाँसको झाँगमा पुराएको अवस्थामा तीनजनाको उद्धार गरिएको थियो । स्थानीय घनश्याम भुसालका अनुसार पहिरोले पुरिएर उनको घरमा पालिएका दुई भैँसी र एउटा गोरुसमेत पुरिएका छन् ।
बिहान चार बजेको समयमा पहिरो आएर घर पुरिएको भुसालले बताउनुभयो । पहिरोले दोबिल्ला फलेवास सडक समेत पहिरोले क्षतबिक्षत भएको छ । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले पहिरोमा पुरिएर एक बालिकाको ज्यान गएको जनाएको छ । घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीले उद्धारको काम गरेको र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहको प्रहरी निरिक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
PREVIOUS Previous post: सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोछ – मन्त्री गुरुङ
NEXT Next post: मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज बस्दै, कुलमान र वामदेवबारे निर्णय हुन सक्ने